UNHCR oo shaacisay in dib-u-noqoshada qaxootiga Dhadhaab ay qaadanayso 10 sano oo soo socda – Radio Daljir
Nofeembar 25, 2013 1:23 b 0
Nairobi, November 25, 2013 – Hay?adda qaxootiga aduunka ee UNHCR ayaa si adag uga jawaabtay hadal shalay ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya, kaas oo sheegay in aysan ka laaban doonin in qaxootiga Soomaalida ay noqdaan, isagoo xusay in saddex sano gudahood ay muhiim tahay in ay dalkooda ku laabtaan.
Madaxa UNHCR ee Kenya Raouf Mazou oo saxaafada kula hadlay Nairobi, waxaa uu si kulul uga jawaabay hadalka wasiirka, isagoo sheegay in aanay suurta-gal ahayn in la celiyo qaxootiga Soomaalida ee Dhadhaab jooga, weliba si deg deg ah.
?qorshahan wuxuu qaadanaya 10 sano, sida dhacday markii la celinayey qaxootiga Liberia, wax hal maalin qaadanaya ma aha.? Ayuu yiri Raouf, waxaa uu hadalkiisa ku sii daray ?heshiiskii dhowaan ee Nairobi ee qaxootiga khuseeyey, wuxuu dhigayey in dadku si iskood ah u noqdaan, maaha in la qasbo.?
?muhiim ayey tahay in aan cadayno cid ku qasbi kartaa Soomaalida ma jirto inay ku noqdaan Soomaaliya.? Raouf waxaa uu xusay xataa marka la eego heshiiskii dalalka Kenya, Soomaaliya iyo UNHCR kadib in xeryuhu sii fidi karaan oo ay iman karaan qaxooti cusub
Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya Joseph Ole Lenku oo dhowaan booqday xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, waxaa uu diiday codsi ay u gudbiyeen odoyaasha iyo horjoogayaasha xeryaha, iyagoo dalbaday in la kordhiyo mudadda saddexda sano ah ee qorshaysan in qaxootigu ku noqdaan.
Joseph Lenku waxaa uu si cad u sheegay in aysan Kenya ka noqon doonin go?aanka ah in qaxootiga jooga Dhadhaab ay dalkooda ku noqdaan.